Maxaa damaanad haystaan macaamisha dahabshiil hadii arinkii dhacay mid ka culusi yimaad? | hubaalnewspaper
Maxaa damaanad haystaan macaamisha dahabshiil hadii arinkii dhacay mid ka culusi yimaad?
Maanta ooynu ogsoonahay in dhaqaalihi aduunku uu ku jiro marxalad aad u adag oo dawladahii reer galbeedka ahaa ee deeq bixiyayaasha ahaa ku tilmamaan dhaqaalaha culeyska kaga soo food eeshay oo erey bixin tiisa khaaska ah ku tusineyso heerka ay leegtahay taaso ay ku tilmamaan in ay tagantey heer “ melt-down” kaas oo ah soomali marka loo fasilo “ dhaalaalay”. Hadaba mida manta aan jecleystey inaan yara bayaamiyi waxa weeye xawaladeeni dalka u weyneyd ee lahayd in ay xafido privacy ga macaamiisheeda oo run ahaantii dhalisey shaki aad u weyn iyo fashilaad badan oo muran ka jiro. Hadaba su’aasha ay xaqa u leeyihin macaamishu waxa weeye ahna iney is weydiyaan maanta ee ka wayn tan ah in lasoo bandhigo accounts yadoodi iyo hantidoodi ayaa ah “ hadii system ka dahabshiil ku shaqeeyi crush garoobo qaabkee ayaa dahabshiil isu deyn saari kareysaa?”, su’aashan oo runti muhiim ah wax badana ifin doonta macaamisha ama dadweynaha reer Somaliland ma ogyihiin policy ga dahabshiil ee xalin kara hadii dhacdo noocaas ihi dhacdo. Waxaan aad uga fikiray in badan anoo kali ah in umadu dayacantahay oo aaney ka war qabin wax badan maanto aduunku aad dhaqalihiisu u liito ood arkeysid waagi baryeyba bangiyadii u waaweyna aduunka oo xidhmaaya sababna ay u tahay aafada manta ka taagan aduunka lakiin mida kale aay tahay in aan marnaba macaamisheeda iyo dadkii ay hantida u hayeen aaney waxba kalumin taaso system kii dowladnimo leh ee sharciga bankiyada.
Hadeynu nahay reer Somaliland inagu hadaba qaabkee ayaa u deyn bixi kartaa Dahabshiil hadii arintan yare e khafiifka ah mid ka culus ay timaad taaso ah in system ku crush garoobo ama saameyso aafada dhaqaalaha aduunka saameysey?
Macaamiisheedu sidey u heli karaan hantidoodi?
Aden cabdi dahir
← Adeegga ZAAD Service iyo Siduu noo Hoday
Muqdisho: Taliyaha AMISOM oo Bahdishay Sh. Shariif, Xasilinta Amingana kala Tashatay Mr. Farmaajo →